La Molina | Akụkọ Njem
Maria | | Getaways, Girona, njem
Ọ ga-abụrịrị na ndị na-agba ọsọ ski ụkwụ zọchara ụkwụ na La Molina, ebe egwuregwu a dị na Cerdaña, mpaghara nke Pylann nke Catalan dị na mpaghara Gerona nke bụ ebe izizi Spani mbụ maka ịwụnye igwe na 1943. Ọtụtụ afọ gachara, A gbanwee La Molina ka ọ bụrụ ebe ọhụụ na nke ọhụụ nke nwere ọtụtụ oge ntụrụndụ na egwuregwu ka afọ ju ọha nke afọ niile. N'okpuru ebe anyị ga-amata ebe ezumike a nke Catalan ka mma.
Skiers na-aga La Molina iji nwee ọ sportụ n'oge oyi a, nwere ike ime ya ihe karịrị kilomita 68 nke ekewara karịa 60 mkpọda akpọrọla maka ọkwa niile. Ogologo kacha nta dị mita 1.700 na ogo kachasị elu bụ mita 2.445. Ugwu ndị a na-enye echiche ndị dị egwu nke jikọtara ugwu na ọhịa Girona.
1 Nke a bụ ebe ezumike M Molina
2 Ihe na ọdụ La Molina
3 Ọrụ La Molina
3.2 Mpaghara ụmụaka
3.3 Mgbazinye akụrụngwa
4 Ka esi aga La Molina?
Nke a bụ ebe ezumike M Molina
Ndị mbido chọrọ ịmịkọrọ n’elu snow n’enweghị nsogbu ọ bụla nwere ihu ọma inwe snowboard na skool skii 13 na La Molina ndị na-akụzi echiche ndị bụ isi ịgba ọsọ n'elu ugwu ya na-acha anụnụ anụnụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke dị na mpaghara Coll de Pal, Pista Llarga na Trampolí.
Agbanyeghị, ndị nwere ahụmịhe nwere ike itinye ụdị ejiji na nka ha na mkpọda na-acha uhie uhie na oji nke ebe ezumike La Molina. Na mgbakwunye, ọ nwere snowpark maka ndị mbido yana ọzọ nwere nnukwu mbara nke nwere ọkara pepipe buru ibu na Catalan Pyrenees.
Ekwesiri ighota na La Molina abụrụla ebe a na-egwu egwuregwu n'ọtụtụ mba, gụnyere 2011 Snowboard World Championship.
Ihe na ọdụ La Molina
Ọ bụrụ na ịgba ọsọ abụghị uwe gị siri ike mana ị ga-aga La Molina iji soro ndị ezinụlọ gị ma ọ bụ ndị enyi gị, ọdụ ahụ na-enye ọtụtụ ọrụ iji nwee ọ funụ ebe ndị ọzọ na-egwu egwuregwu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịtụgharị uche ebe ọdịda ala nke Vall de la Cerdanya nyere na ọnụ ọnụ gbara ya gburugburu, a na-atụ aro ka ị were ụgbọ ala USB, nke na-eduga ebe kachasị elu nke ọdụ ebe Niu de l 'mgbaba Àliga nke ị nwere nkwenye dị egwu ga - eme ka ị ju gị anya.
Ebe ezumike La Molina nwekwara ụzọ na okirikiri iji were njem segway, ụgbọ eletrik nwere ụkwụ abụọ nke ị nwere ike ịkwọ onwe gị.
were gị n'okike ma ọ bụ site na snowmobile na-eme njem nlegharị anya abalị naanị ọkụ nke ọgba tum tum ahụ. Atụmatụ dị iche maka ndị chọrọ ịnụ ụtọ La Molina n'ụzọ pụrụ iche.
Ọrụ La Molina
Ebe a na-egwu mmiri na La Molina na-enye ndị ọbịa ya ọtụtụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ebe ha nwere ike ịnweta ma ọ bụ rie nri nri ugwu. N'ime nhọrọ gastronomic bụ ụlọ oriri na ọ Elụ Elụ El Bosc (ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ escudella ọdịnala ma ọ bụ anụ a ghere eghe), ụlọ oriri na ọ Rụ Costaụ Costa Rasa (ezigbo maka ị drinkụ ihe ọ drinkụ hotụ na-ekpo ọkụ yana sandwich), Alabaus cafeteria (ebe dị mma nke nwere echiche kacha mma) nke Pla Planenyella) ma ọ bụ El Roc cafeteria (nke zuru oke maka iri nri ụtụtụ zuru oke tupu ụbọchị kpụ ọkụ n'ọnụ na snow).
Ebe ezumike La Molina nwere oghere abụọ raara nye ụmụntakịrị: ama egwuregwu na ogige snow. A raara nke mbụ nye ụmụaka ma nwee ndị na-elekọta ya ma nke abụọ ezubere maka ụmụaka sitere na afọ anọ chọrọ ịmara egwuregwu egwuregwu oyi na snow. Ọ bụ ya mere ha ji enye anyị ụlọ akwụkwọ mmeghe na nkuzi yana nkuzi onwe onye.
Ama egwuregwu na ụlọ akwụkwọ ski M Laina na-enye oghere abụọ maka mmemme emere maka ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ nọ n'afọ ndụ dị iche iche: ogige snow na ebe egwuregwu.
La Molina ski Resort na-enye ọrụ mgbazinye maka egwuregwu oyi dị ka ịgba ọsọ, snowboarding ma ọ bụ snowshoeing maka ma ndị okenye ma ụmụaka.
Ka esi aga La Molina?
Ski na ọdụ La Molina nwere uru ọ na - ejikọ iji ụzọ njem dị iche iche dịka ndị a:
Ụgbọ: Site na Barcelona njem ahụ dị ihe dị ka awa 2.
Tren: Were akara R3 ma were ụzọ si Hospitalet de Llobregat - Vic - Ripoll - Puigcerdà - La Tour de Carol, La Molina na-akwụsị. Site n’ọdụ ụgbọ oloko ị nwere ike iburu bọs nke nwere ugboro 15 ma ọ bụ 30 nkeji gaa ebe ezumike La Molina.
Avión: ọdụ ụgbọelu kacha nso bụ Barcelona - El Prat (166 kilomita), Gerona - Costa Brava (kilomita 127) na Cerdaña aerodrome (kilomita 16).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » La Molina
5 Osimiri Fuerteventura maka ezumike ezumike gị ọzọ